Ikhompyutha idinga ukuphatha ngokucophelela nokugcinwa ngezikhathi ezithile. Kufanele ulandele eminye imithetho yokunakekela ikhompyutha yakho.
Indlela yokwandisa impilo yekhibhodi.
Uma ungafuni ukuthi izinkinobho ezimhlophe zekhibhodi zishintshe umbala kumnyama, kufanele uzifake ngezikhathi ezithile. Ukuze wenze lokhu, qala ukuvala ikhibhodi bese uyisula ngendwangu encane. Kungakhathaliseki ukuthi uzama kanzima kanjani ukusebenza kahle kwikhibhodi, ngokuhamba kwesikhathi, ukungcola, ama-clogs amancane phakathi kwamakhi. Ngezikhathi ezithile, udinga ukuvula ikhibhodi bese uyigwedeza. Ungathola izinto eziningi ezithakazelisayo lapho. Akufanele sikhohlwe ukuthi ungakwazi ukukhipha nokuxhuma ikhibhodi kuphela uma ikhompyutha ivaliwe. Uma kungenjalo, ungakwazi nje ukubhubhisa kokubili ikhibhodi nebhodi le-motherboard. Ukuze uhlele ukuhlanzwa jikelele kwekhibhodi, udinga ukuthatha izithombe noma udwebe indawo okhiye. Lokhu kuzovimbela ukuqoqwa okungaboni kwekhibhodi. Izihluthulelo ziqoqiwe esikhwameni seplastiki, engeza i-powder yokuhlanza ngamanzi bese uqala ukuwuzungeza ngamandla. Bese ugeza ngamanzi ahlanzekile, bese ubeka izihluthulelo ethawula. Ungayomisa ngokwemvelo, noma ungasebenzisa i-hairdryer. Uma okhiye abakwazi ukususwa kusuka kwikhibhodi, kuzodingeka uwahlanze kanye nekhibhodi ngendwangu emanzi. Ungadli amanzi phezu kwekhibhodi. Hlanza ikhibhodi kusuka othulini okungenani kanye njalo ezinyangeni ezintathu.
Iqapha kumele lihlanzwe njengoba lihlamba. Futhi lokhu cishe kanye ngesonto. Ukuze uhlanza i-monitor, kungcono ukusebenzisa indwangu yokugqoka. Ngemuva kokungena emanzini afudumele, sula isilonda, bese uyomisa ngenye indwangu. Kuthengiswa kukhona ama-wipe akhethekile we-monitor. Ungasebenzisa i-napkins yezibuko. Ungasebenzisi utshwala ukuze usule umlenze. Ungalimaza ukugqoka okuphikisayo. Futhi uma une-LCD qapha, uzoyiphatha.
Hlanza kahle ikhompyutha yakho - akuyona umsebenzi olula. Kodwa ungakhohlwa ukukhipha ipulagi kusuka ngaphandle ngaphambi kokuqala umsebenzi. Ukuhlanza isistimu yesistimu cishe kuyisenzakalo esithwala kakhulu futhi esiyinkimbinkimbi. Inqubo yokusebenza yeyunithi yesistimu yekhompiyutha ifana neyomsebenzi wokuhlanza. Ukuhamba kwamanzi okuyinhloko kusikhungo sesistimu kunqunywa ukusebenza kwe-fan supply supply. Umoya ozungezile uhlelo lwesistimu uqukethe uthuli olufakiwe. Zishukela emigodini yokuphuza umoya, zingena emanzini amandla futhi ziphume ngokusebenzisa indawo yokuhlinzeka ngamandla. Ngakho-ke ukungena komfutho kuphethwe yizingxenye zangaphakathi ze-unit unit. Ngokuhamba kwesikhathi, ungqimba lwefomu lokungcola. I-unit unit kufanele ihlanzwe kanye nezinyanga eziyisithupha. Ukuhlanza unit unit akuyona umsebenzi olula. Umthumeli akakwazi ukukwenza. Kungcono ukumema ochwepheshe. Uma nje uthuli oluningi luthelwa ngaphakathi kweyunithi yesistimu, uzokuqonda lokhu ukuthi abalandeli baqala ukusebenza kakhudlwana. Futhi ngenxa yokupholisa okuncane, ikhompyutha ingahle ivele noma iphule. Ngokuhlanza okukhulu uhlelo lusetshenziswayo lungasebenzisa i-vacuum cleaner. Vula ikhava yecala kanye nemodi "yokushaya", ngokucophelela, ngaphandle kokuthinta amabhodi, uphuthule uthuli.
Uma uqaphela ukuthi umshini we-CD-ROM awufundi kahle ama-discs, sebenzisa ama-discs akhethekile ukuwahlanza.
Ungakwazi ukuhlanza igundane lakho kanye njalo emva kwezinyanga ezintathu. Ukuze uyihlanze, thatha uboya bekotini, indwangu noma i-napkin ehlanganiswe utshwala. Qinisekisa ukuthi uhlanza ibhola uma igundane lingumshini. Ngaphezu kwebhola ehlanzekile othulini, ungakhohlwa ama-rollers amathathu. Baxhumana nebhola endaweni yokusebenza. Idijithi yegundane ingasuswa ngensipho futhi ivumeleke ukuba yomile.
Kususa isikhalazo ku-laptop.
Kwezinye i-laptops, izingxenye zomzimba nezembozo zinomphela ozwakalayo. Kuhle kakhulu, kodwa izindawo ezinjalo azivikelwe emikhanyeni. Ukuze ususe lezi zikhalo, ungasebenzisa unamathisela wokupholisa. Ekuqaleni, sebenzisa le polish ne-wadded noma i-napkin iqala ukugubha. Uma isikebhe sijulile. Engeza i-polish uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphuthukise. Isiqephu sizophela.
Uma uziqonda ukuthi ungahlanza kahle kanjani ikhompyutha ngothuli, khona-ke kuzokukhonza iminyaka eminingi.
Izipho Zonyaka Omusha 2010
Smells no Feng Shui. Ama-aroma wesifundo, igumbi lokulala ...
Amathiphu Awusizo Awusizo: Indlela Yokuqeda Ama-Moths
Izakhiwo zokwelapha nezomlingo we-sardonyx
Imikhiqizo yobuhle bemvelo yabesifazane
Amakhukhi okhilimu omuncu
Inkukhu ebhakawa usawoti
I-Psychology yezingane enkulisa
Yeka uthando lomfana othandanayo
Amadivayisi eco ewusizo ekhaya lakho ozithandayo
Ukudla kwe-Strawberry - ukulahlekelwa isisindo kuze kube yi-3 kilograms izinsuku ezingu-4
Ukuhambela izivakashi ngokusheshisa